महामारी र व्यापार युद्ध अन्तर्गत, दक्षिण पूर्व एशियाली अर्धवान्डकर्मीहरूको राम्रो भविष्य हुनेछ? - YIC International International Co |तपाईंको इन्टरजेटेड सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स घटक आपूर्तिकर्ता |www।YIC-Electronics.com
घर > समाचार > महामारी र व्यापार युद्ध अन्तर्गत, दक्षिण पूर्व एशियाली अर्धवान्डकर्मीहरूको राम्रो भविष्य हुनेछ?
महामारी र व्यापार युद्ध अन्तर्गत, दक्षिण पूर्व एशियाली अर्धवान्डकर्मीहरूको राम्रो भविष्य हुनेछ?
मलेसियाले देशव्यापी नाकाबन्दी जून 1 मा नाकाएको कारण मूल रूपमा शान्तिमय दक्षिणपूर्व एशिया फेरि महामारीको व्हरको व्हिलपूलमा पक्रिए। प्रति व्यक्ति आधारमा गणना गरिएको, मलेशियाको दैनिक मूल्यमा भारतको दैनिक समूहले भारतका नयाँ मुकुट, भियतनामका घटनाहरूको कुल संख्यामा दोब्बर भएको भन्दा दोब्बर संख्या भन्दा बढी भएको छ। दक्षिणपूर्व एशिया, एक प्रमुख अर्धवान्द्रकर्मी उत्पादन केन्द्र को रूप मा, पूर्वी एशिया को रूप मा प्रसिद्ध छैन, तर यो वास्तवमा उद्योग चेन मा एक महत्त्वपूर्ण लिंक हो। बारम्बार महामारी र न्यानो व्यापार युद्धको पृष्ठभूमिको बिरूद्ध, अर्ध मजदुरहरूको सर्तमा कस्तो भविष्यको दक्षिणपूर्व एसियाको सामना गर्नुपर्नेछ।
दक्षिणपूर्व एशियाको शक्तिलाई कम नगर्नु
विज्ञहरूको सामान्य प्रशासनले जुलाई 2020 को घोषणा जारी गर्यो जुन एसिसेनबाट एकीकृत सर्कुटहरूको223..831 अर्बरको आयात गरिएको, एसियनसम्म आयात को कुल मूल्यको लागि। 2.69..68 अर्ब युआन, 29.1% को बृद्धि, एसेनको कुल निर्यात मूल्यको 6..8% को लागी। एसेनियाले मलेसिया, सिंगापुर, थाईल्याण्ड, भियतनाम र अन्य देशहरू पनि समावेश गर्दछ र विश्वमा अर्ध मन्डराकहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्यात क्षेत्र मध्ये एक हो।
विश्वव्यापी अर्धविचटान्डरकर्ता उद्योग चेन मा सबैभन्दा ठूलो असर मलेशिया हो। यो देश विश्वको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण अर्धवान्ड टेम्पिंग प्याकेजिंग र परीक्षण आधारहरू हो, विश्वको प्याकेजिंग र परीक्षण शेयरको लागि लेखन, र यो पनि संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्धवेन्द्रन्डंडर निर्यात केन्द्र हो।
इंटेल, AMD, NXP, ASEPP, Subimroewornchicsics सहित 500 बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु, मलेशियामा सम्मेलन र परीक्षण लाइनहरू छन्।
मलेसियाको पेना ung ्ग पूलनको रूपमा चिनिन्छ। यसमा 1 भन्दा बढी भन्दा बढी विविध लोभ गरिएको स्थानीय आपूर्तिकर्ताहरू, सफ्टवेयर विकास, विद्युतीय प्रसंस्करण र धातु प्रशोधन सहित खेतहरू ढाकिएको छ, ell, विद्युतीय प्रक्रिया, र आईफोन आपूर्तिकर्तालाई सहित। , त्यहाँ उत्पादन प्लान बनाएको छ।
मलेशियाको विश्वव्यापी ब्याक-अन्त अर्धविराम निर्माण बजारको हिस्साको हिस्सा 8% छ, जसमध्ये 800% ले place0% योगदान पुर्याउँछ, ग्लोबल माइक्रोएक्टिन विरोधी र परीक्षणको क्षेत्रहरूमा लाभ उठाउनुहोस्।
सिंगापुर दक्षिणपूर्व एशियामा अर्ध मन्डिहापदार्थको अर्को पावरहाउस हो र यसको उदार औद्योगिक नीतिहरूको लागि परिचित छ। बोस्टन परामर्श समूह (बीसीजी) द्वारा अनुमान गरिएकामा, यदि संयुक्त राज्य अमेरिकामा कटौती-एज मेमोरी कारखाना सञ्चालन गर्ने लागत 100 बर्ष 1 मा सेट गरिएको छ भने, यो सिंगापुरमा is is हुनेछ। मुख्य कारण उपकरण लगानी र कर्पोरेट करका लागि प्राथमिकताकालीय नीतिहरुमा भिन्नता हो।
21 औं शताब्दीको पहिलो दशकमा सिंगापुरका सेलिकाअरोन्डरक सम्बन्धी कम्पनीहरूको संख्याले उत्तर अमेरिका, युरोप, जापान र अन्य क्षेत्रहरू पार गर्यो, जसमा 40 आईसी डिजाइन कम्पनीहरू, 1 pice विशेष fhes सहित। , 20 प्याकेजिंग र परीक्षण कम्पनीहरू, र केही कम्पनीहरूको सब्सट्रेट सामग्रीहरू, उत्पादन उपकरण, फोटोमास्क र अन्य उद्योगहरूको प्रभारी केही कम्पनीहरूले।
जनवरी 1 ,, 202 मा, सिंगापुर सरकार 2020 मा निर्यात 122..4 बिलियन सिंगापुर पुगेको छ। 2012.3% मा वृद्धि हुनेछ, इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू र ट्रान्जिटरको निर्यात बलियो भएको छ, त्यसैले समग्र निर्यात मूल्य महामारी अन्तर्गत वृद्धि गति कायम छ।
सिंगापुर र मलेसियासँग तुलना गरिएको, फिलिपिन्स र मलेसियाको तुलनामा फिमान्टान्डुअन्क्टर उद्योगको लेआउट पूर्ण छैन, विशेष गरी Mlccको उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गर्दै। अन्तर्राष्ट्रिय MLCC निर्माताहरू जस्तै समेटण, सामसुका इलेक्ट्रिक-मेकानिक्स र फिलिपिन्सको राजधानी मनिलास, ताति यनका कारखाना छन्। नतिजाको रूपमा, मनिलाले "MLC कारखानाको भेला स्थान" शीर्षक प्राप्त गरे।
थाइल्यान्ड र फिलिपिन्स समान अवस्थाहरूमा छन्। तिनीहरू हार्ड डिस्क उत्पादन भन्दा शक्तिशाली छन् (हार्ड डिस्क ड्राइभहरू सहित), र वर्तमानमा विश्वको दोस्रो ठूलो हार्ड डिस्क निर्यातकर्ता र निर्यातकर्ता। 201 2017 मा थाइल्याण्डको इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगको कुल व्यापार ध्वधिक करीव billion1 अर्ब डलर थियो, जसमा राजस्व निर्यात करीव $$ अरब अमेरिकी डलर थियो।
भियतनाम दक्षिण पूर्व एशियाई अर्धोलान्क्टरहरूको लेट स्टार हो। टेस्नाभिओ, एक विश्वव्यापी टेक्नोलोजी अनुसन्धान कम्पनी, पूर्वानुमान गरिएको कि भियतनाममा 2020 लाखदेखि $ 6.16 अर्बसम्म अमेरिकी जनसंख्याको मात्रा हो, जुन हो सबै उद्योगहरूको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण, त्यसैले यो ठूलो क्षमता छ।
201 2013 मा, भियतनामको अर्धविश्का टेक्नोलोजी उद्योगले भियतनामी सरकारको ध्यानाकर्षण गर्यो र त्यस समयमा देशको नौ कुञ्जी उत्पादन क्याटलगमा समावेश थियो। त्यस वर्ष सरकार समर्थनको दाँतमा औसत वार्षिक मेलबारको औसत वार्षिक कारोबार र कलेजहरूले प्रासंगिक विकास प्रतिभाको तालिम पनि मजबुत बनाउनका लागि लक्ष्य हासिल गरे पनि एकीकृत सर्किट कारखानाहरू, र ध्यान केन्द्रित गरे सेमिन्डुन्डरकक्टर प्रविधि उद्योगलाई एकीकृत गरेको राष्ट्रिय विकास रणनीतिहरू एकीकृत गर्दै।
वर्तमानमा, इंट्यून र याबेलले हो कि ची MIN MIN Ach मा सागन हाई-टेक पार्कमा धेरै वर्षमा सञ्चालनमा छ। आजकल धेरै विदेशी कम्पनीहरूले वरपरको हो चीनो मिन्ह शहरमा लगानी गर्ने छनौट गर्छन्: डेर ong एनईई, बेनो निन, हनोरी र अन्य ठाउँहरू।
अर्धवान्द्र उद्योग मा दक्षिण पूर्व एशियाको विशेष स्थितिको कारण र 2020 मा महामारीको निलम्बनले वर्तमान अवस्थामा विशेष ध्यान दिइरहेको छ।
चीन संग जोडिएको रूपमा जोडिएको
दक्षिणपूर्व एशिया अर्धविडकारी उद्योगको स्थानान्तरणको पनि एक हिती हो। सिंगापुर र मलेसियाले 1 1990 19900को दशकमा जापान र दक्षिण कोरियाबाट चिप्स लगायत केही अर्धविकाल उद्योगहरू लिन थाले। मतभेदको 300 बर्षको अवधिमा, अर्धविहीनकहरू यी दुई देशका स्तम्भ उद्योगहरू बनेका छन्। फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, र भियतरामले पनि ठूलो सम्भाव्यहरू हेर्छन्, कम श्रम र जग्गा लागतको साथ अधिक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्ने आशामा ठूला सम्भावनाहरू हेर्छन्।
दक्षिणपूर्व एशिया र चीनमा अर्ध मन्डरालयकर्ताहरू धेरै घनिष्ट सम्बन्ध छन्। माथि उल्लेख गरिए अनुसार, चीन र दक्षिणपूर्व एशियाली देशहरू बीच अर्धन्डरकक्टर व्यापार द्विपक्षीय व्यापार को सबै भन्दा महत्वपूर्ण हिस्सा भएको छ। तथ्या .्कका अनुसार, चीनको आयात224% बर्षे वर्षाको आयात228% वर्षमा वृद्धि भएको छ (2 29% वर्षमा बसे)। सेमिडीको एक्लै एक्स्टानको साथ चीनको व्यापारको वृद्धि दर Ase.2 प्रतिशत बिन्दुले प्रयोग गर्यो।
परम्परागत देशहरू बाहेक मलेसिया र सिंगापुर जस्ता पारदर्शिकालीन व्यापार, चीन र उदीयमान बजार देशहरू बीच पनि विस्तार भइरहेको छ।
चीन चेन वाणिज्यबाट आयात र मेसिनरनिक उत्पादनहरूको निर्यात, अगस्त 201 2016 देखि भियतनामको लागि एकीकृत सर्कुटहरूको निर्यात पर्याप्त मात्रामा बढेको छ। मे 2020 को रूपमा, भियतनामको मासिकमा एकीकृत उत्पादनको मासिकमा 1 $ करोड अमेरिकी डलर अमेरिकी डलर 1. 1.1 करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ।
भियतनामको भियतनामी जस्ता उदीयमान देशहरू पनि चीनबाट अविश्वासी हुन् यदि तिनीहरू आफ्नै अर्धवांडरकर्ता उद्योगहरू विकास गर्न चाहन्छन् भने। टेलिनेभियाले भविष्यवाणी गरेका छन् कि भियतनामको सेमिटिटोकर्केट बजार USD 6.1670.3 अर्ब2billion अर्बको बराबरको (RMB 52.3 अर्ब) को बराबर हुनेछ। भित्री उद्योगको विश्लेषणका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अर्ध मंडोरक्टर राक्षसहरू जसले भियतनाम बजार मूल्य खोल्न चाहन्छन् जुन भियतनाम चीनको नजिक छ, र मुख्य उपकरण भागहरूको स्थिर आपूर्ति प्राप्त गर्न सक्दछ।
Areiplool र भविष्य
सबै पछि, महामारीको प्रभाव अस्थायी हो। दक्षिणपूर्व एशियामा अर्ध मन्डराकहरूको विकासलाई छोटो अवधिमा व्यापार लडाई हो, र दीर्घकालीन मा यो योगदान गरिनेछ।
व्यापार युद्धको प्रकोपमा, धेरै अमेरिकी र युरोपेली निर्माताहरूले उनीहरूको निर्माण र चीनबाट दक्षिण पूर्व एशियासम्म सम्पन्न गरेका छन्। पाओ-अमेरिकी ट्रेड युद्ध बढेपछि यी कम्पनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्यात जारी राख्न सके, र संयुक्त राज्य अमेरिकामा संयुक्त एशियाई देशहरूको निर्यात द्रुत रूपमा बढे।
एकै साथ विदेशमा विदेशी राजधानी पनि व्यापार युद्धको कारण दक्षिणपूर्व एशियाको पक्षमा सम्मिलित हुन थाल्यो। उदाहरणको रूपमा मलेसिया लिनुहोस्। विगतको तुलनामा 2020 20 को पहिलो आधामा यसको विदेशी प्रत्यक्ष लगानी विगतको तुलनामा 11 अरब पुगेको छ, जुन विगतमा कुनै पनि वर्षमा स्वागत छ कुल लगानीभन्दा बढी छ।
यद्यपि लाभांशको यो लहरले दक्षिणपूर्व एशियाई अर्ध मन्जाकारीको भविष्यलाई समर्थन गर्न सक्छ?
दक्षिणपूर्व एशियाली देशहरूले आफ्नै अर्ध मन्डरायिक पारिस्थितिलको विकास गर्ने र अन्ततः कारखानाहरूको स्थितिबाट छुटकारा पाउने आशा गर्छन्।
मलेसिया, धेरै स्थानीय अर्धवान्डरकर्ता र अर्धविकासेटक्टर सम्बन्धी कम्पनीहरू, विशेष गरी सेमीन्डोरक्टर उद्योग चेंडरमा संलग्न र कम अन्तमा संलग्न छन्, विदेशीहरू, आईसी विकासकर्ताहरू र निर्माताहरूको लागि सेवाहरू समावेश छन्।
201 2018 देखि 2022 सम्म मलेसियाका स्थानीय इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रको औसत वात वार्षिक राजस्व क्षेत्र .6..6% पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। .6%। "यो EMS हो, ओटीट, वा R & D र इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरूको डिजाइन, मलेशियन कम्पनीहरूले ग्लोबल आपूर्ति श्रृंखलामा उनीहरूको स्थिति सुदृढीकरण गरेका छन्।" एक विदेशी पर्यवेक्षकले यो मूल्यांकन देखाए।
मलेशियन सरकारले देशको उच्च मूल्यमा थपिएको अर्धवान्डुनिकल उद्योगलाई प्रचार गर्न कर प्रोत्साहन दिने योजना बनाएको छ।
सिंगापुरमा सरकारले आफ्नो रणनीतिमा आधारित छ कि विदेशी लगानी र इन्टरनेट सहित एक बहु-अर्ब डलर प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुरु गरेको छ।
सिंगापुरको भावी आर्थिक परिषद सिंगापुरका लागि प्रमुख विकास चालकको रूपमा सौन्दर्य निर्माण चालकको रूपमा सौन्दर्य निर्माणको रूपमा। "अनुसन्धान, नवीनता र उद्यम 2020 योजना" को समर्थन ", सिंगापुर सरकारले only अर्ब रुपैयाँ विनियोजित गरेको सद्भावित छ।
भियतनामले पनि यसको स्थानीय सेनामारकर्ता उद्योगको विकासमा दर्साउँछ। स्थानीय मिडिया रिपोर्टका अनुसार, हानोईमा भियतनामको राष्ट्रिय औद्योगिक र उच्च-टेक पार्कहरू ह Hin ्ग मिन शहर, ह Hong क Kong, ह Hun ्ग क Known ्ग, बेदी निन्शु र ब्याट giang एक महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र लगानी आकर्षित गर्दछ विदेशी कम्पनीहरूबाट।
यद्यपि उद्योगमा दक्षिणपूर्व एशियाई अर्धोलाजारहरूको भविष्यको बारेमा शंका छ। वरिष्ठ उद्योगले विश्लेषण चहंग जुले विश्वास गर्दछ कि भविष्यमा चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको विमार्ककारीहरू छन् भने पनि, दक्षिणपूर्व एशियाका अर्गन्डिंगकर्मीहरूले धेरै परिवर्तनहरू पार गर्दैनन्।
"सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तोडाको अभाव हो," झांगाले भने, "Semanguductage काउन्ट प्रशिक्षण भनेको एक व्यवस्थित परियोजना हो। सर्तमा कुनै पत्राचार छैन योजनाहरू। "
एक प्रतिस्पर्धी कारक को रूप मा सस्तो श्रव को युग को एक प्रतिस्पर्धी कारक पारित छ।एक घरेलु विज्ञले एक पटक औंल्याए कि "शिक्षा, प्रशिक्षण, र पूर्वाधारपूर्णले भविष्यको प्रतिस्पर्धाको कारकहरू गठन गर्दछ।"
"यसका साथै, अर्ध मन्जरहरूको विकास पनि आफ्नै परिस्थितिको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हो, तर त्यहाँ प्रत्येक क्षेत्रका अग्रणी देशहरू हुन धेरै गाह्रो हुन्छ।"Zheng ua जोडे।
विश्वव्यापी अर्धन्डोन्डुड्रक्टर उद्योग चेन, प्रत्येक देश वा क्षेत्रको सब भन्दा उपयुक्त स्थिति छ, जुन वर्षौं उमेरको गठन पछि गठन गरिएको अवस्था पनि हो।दक्षिण पूर्व एशियाय देशहरूको लागि जुन अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न चाहन्छ, अगाडि सडक सहज हुँदैन।